လက်ကား Naivy တရုတ်လိမ္မော်ရောင်အော်ဂဲနစ်ရွှေဖရုံသီးအစေ့ထုတ်လုပ်သူနှင့်ရောင်းချသူ |Shuangxing
Naivy တရုတ်လိမ္မော်ရောင် အော်ဂဲနစ်ဖရုံသီးအစေ့
အရှည်: 25-30 စင်တီမီတာ; အချင်း: 13-15 စင်တီမီတာ;
ရင့်ကျက်မှု-95 ရက်ခန့် ;
စိုက်ပျိုးခြင်း-တစ်ဧက အပင် 5000 ဝန်းကျင်.
Phytosanitary လက်မှတ်;GMO မဟုတ်သော လက်မှတ်၊မူရင်းလက်မှတ်;ISTA လက်မှတ်။
1. ဒေသရာသီဥတုအလိုက် အပင်ရာသီကွာခြားမှု နှင့် ဧရိယာကွာခြားမှု။
2. အချိန်နှင့်တပြေးညီ မှန်ကန်သောပမာဏကို လုံလောက်သော အခြေခံမြေဩဇာနှင့် အပေါ်မှအပလီကေးရှင်းကို အသုံးပြုပါ။
3. မြေဆီလွှာ- နက်ရှိုင်းသော၊ ကြွယ်ဝသော၊ ကောင်းမွန်သောရေသွင်းမှုအခြေအနေ၊ နေသာသည်။
4. ကြီးထွားမှုအပူချိန် (°C): 18 မှ 30 ။
ဖန်လုံအိမ်နှင့် ပွင့်လင်းလယ်ကွင်းများအတွက် သင့်လျော်သော၊ မြေသြဇာအလုံအလောက်၊ ပန်းပွင့်ပြီးနောက် အပေါ်ယံအလိမ်းလိမ်းနှင့် ရေလောင်းခြင်းကို အာရုံစိုက်ပါ၊ အင်းဆက်ပိုးမွှားလှုပ်ရှားမှုမရှိသည့်အခါ ယေဘူယျအားဖြင့် တစ်ဧကအပင် 13200၊ ဝတ်မှုန်မှုန်ကူးခြင်း သို့မဟုတ် auxin ပါသော အပွင့်သည် အသီးထွက်နှုန်းကို တိုးတက်စေရန် အထောက်အကူဖြစ်စေပါသည်။
1. ဤမျိုးစေ့သည် F1 မျိုးစေ့ဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည် စိုက်ပျိုးရန်အတွက် မျိုးစေ့များကို သိုလှောင်ထားတော့မည်မဟုတ်ပါ။
2. မွေးရာပါ ရှုပ်ထွေးသော မျိုးစေ့များနှင့် မြေဆီလွှာ၊ ရာသီဥတု၊ ယဉ်ကျေးမှု နည်းစနစ်များမှ ကူးစက်သောကြောင့် စိုက်ပျိုးခြင်းကို ဂရုစိုက်ပါ။
3. ဤမျိုးစေ့များကို အေးပြီးခြောက်သွေ့သောနေရာတွင် သိမ်းဆည်းပါ။အာမခံကာလ3နှစ်။
1. ဝယ်ယူသူ၏ ရာသီဥတုနှင့်အညီ သင့်လျော်သောမျိုးကွဲများကို ရှာဖွေရန် ကူညီပေးပါ။
2. သီးနှံစိုက်ပျိုးချိန်အတွင်း နည်းပညာအတိုင်ပင်ခံ။
4. အကောင်းဆုံးရေကြောင်းလမ်းကိုရှာဖွေရန် ကူညီပါ။
a၃၁ နှစ်၎မျိုးစေ့ထုတ်ခြင်းနှင့် မျိုးစေ့ထုတ်ခြင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုအတွေ့အကြုံ။
ခမျိုးစေ့တင်ပို့ခြင်းအတွေ့အကြုံ ၆ နှစ်။
ဂ။Alibaba တွင် ယုံကြည်စိတ်ချရသော ရွှေပေးသွင်းသူ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် စမ်းသပ်ရန်အတွက် နမူနာအနည်းငယ်ကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။ဒါပေမယ့် ဖောက်သည်က ပို့ဆောင်ခကို တတ်နိုင်ရမယ်။ဝယ်သူသည် စမ်းသပ်မှုရလဒ်ကို ရောင်းချသူအား ပေးဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
က) ကျွန်ုပ်တို့ထံ စုံစမ်းမေးမြန်းရန် ပေးပို့ပါ။
ခ) သင့်လျော်သောမျိုးကွဲများကို အတည်ပြုရန် ဝယ်ယူသူနှင့် ဆွေးနွေးပါ။
ဂ) အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ရာတွင် အခြားပစ္စည်းများနှင့် အရေအတွက်နှင့် ဈေးနှုန်းကိုလည်း သေချာပါစေ။
ဃ) စာချုပ်မူကြမ်း သို့မဟုတ် Proforma ပြေစာ။
င) ဝယ်သူသည် စာချုပ် သို့မဟုတ် PI အရ ပေးဆောင်ရမည်။
f) ရောင်းချသူသည် စာချုပ် သို့မဟုတ် PI ပေါ်မူတည်၍ Shpping စီစဉ်ပေးသည်။
ဆ) ဝယ်ယူသူသည် သင်္ဘော၏ စာရွက်စာတမ်းအားလုံးကို အတည်ပြုပြီးနောက် ငွေပေးချေမှု၏ လက်ကျန်ငွေကို ပေးချေသည်။
ဇ) ရောင်းသူသည် ခြေရာခံအမှတ်ကို ပေးသည်။စာရွက်စာတမ်း အားလုံးကို ဝယ်သူထံ ပေးသည်။
ဈ) ကုန်စည်ကို ဝယ်ယူသူမှ လက်ခံရရှိခြင်း။
(ည) မျိုးစေ့များပေါက်နေချိန်အတွင်း ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုအတွက် ရောင်းသူသည် ဝယ်သူနှင့် အဆက်အသွယ်ထားရှိရမည်။
k) နောက်အစီအစဉ်ကို ဆွေးနွေးခြင်း။
ဥယျာဉ်ဖောက်သည်များအတွက် အထုပ်သေးလေးတစ်ထုပ်လျှင် အစေ့ ၁၀ စေ့ သို့မဟုတ် အစေ့ ၂၀ ပါရှိနိုင်သည်။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖောက်သည်များအတွက် အထုပ်ကြီး၊ အစေ့ ၅၀၀၊ အစေ့ ၁၀၀၀ သို့မဟုတ် ၁၀၀ ဂရမ်၊ ၅၀၀ ဂရမ်၊ တစ်ထုပ်လျှင် ၁ ကီလိုဂရမ် သို့မဟုတ် သံဖြူဖြစ်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖောက်သည်များ၏ လိုအပ်ချက်အတိုင်း အထုပ်ကို ဒီဇိုင်းဆွဲနိုင်သည်။
ပုံမှန်အားဖြင့် ပို့ဆောင်ရန် စီစဉ်ပေးပါမည်။ အလုပ်လုပ်ရက်3အတွင်းစာတိုက်ဖြင့်ဖြစ်စေ Express ဖြင့်ဖြစ်စေ အလုပ်လုပ်နိုင်သောငွေပေးချေမှုကို အတည်ပြုပြီးနောက်။​လေ​ကြောင်း​ကြောင့်​ဖြစ်​ဖြစ်​ ​ရေ​ကြောင်း၊ကျွန်ုပ်တို့ အချိန်ပိုလိုနိုင်ပါသည်။
ပို့ခက သာမာန်စာတိုက်ထက် အမြန်ပို့လျှင် ပို့ဆောင်ခ ပိုပေးမည်။
အလုပ်လုပ်ရက် 7-30 ခန့်
အလုပ်ချိန် 10-15 ရက်ဝန်းကျင်
အလုပ်ချိန် 4-7 ရက်ဝန်းကျင်
အလုပ်ချိန် 5-7 ရက်ဝန်းကျင်
အလုပ်လုပ်ရက် 15-30 ခန့်
အော်ပရေတာများပိုမိုအောင်မြင်စေရန်၊ တောင်သူလယ်သမားများပိုမိုချမ်းသာလာစေရန်၊ စားသုံးသူများကျန်းမာလာစေရန်အတွက် အရည်အသွေးပြည့်မီသောထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ဖောက်ဖျက်၍ ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန် ကတိပြုပါ။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ တောင်သူလယ်သမားများအတွက် ယုံကြည်စိတ်ချရဆုံး မျိုးစေ့ပေးသွင်းသူ ဖြစ်လာပါ။
ယခင်- တရုတ်စက်ရုံ Blocky ခေါင်းလောင်းမွှေး အစိမ်းရောင်စပ်ငရုတ်ကောင်းစေ့များ စိုက်ပျိုးရန်
နောက်တစ်ခု: Hybrid Jade No.1 အစောပိုင်း ရင့်ကျက်ချောမွေ့သော အစိမ်းရောင် အရေခွံ squash အစေ့များ
တရုတ် နွေရာသီ သရက်ပင် အစေ့အဝိုင်းပုံသဏ္ဍာန်
တရုတ် f1 မျိုးစပ် အနက်ရောင် ခရမ်းချဉ်သီး အစေ့ကို စိုက်ပျိုးပါ။
ရွှေနေရောင် အဝါရောင် ဖရဲသီးအစေ့
တရုတ်နိုင်ငံထုတ် ပူပူနွေးနွေး အသီးအနှံများ အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော အသီးအနှံများကို ရောင်းချခြင်း...
စပ်မျိုး ဟင်းရွက်အစေ့ရောင်းရန် ပူပူနွေးနွေး သခွားသီး...
ဖန်လုံအိမ်စိုက်ပင်အတွက် F1 စကွပ်စေ့များ စိုက်ပျိုးခြင်း...